Maxkamadda Rafcaanka oo xoriyadoodii usoo celisay Badhasaabkii Hargeysa iyo Agaasimihii dib u Dejinta – Araweelo News Network (Archive)
Maxkamadda Rafcaanka oo xoriyadoodii usoo celisay Badhasaabkii Hargeysa iyo Agaasimihii dib u Dejinta
Hargeysa(ANN)Maxkamadda rafcaanka gobolada Hargeysa ayaa m aanta xoriyadoodii us oo celisay Badhasaabkii gobolka Hargeysa Ahmed Cumar C /llaahi Xamarji iyo Agaasimihii wasaaradda dib u dejinta Somaliland Axmed Cilmi Bare (Ina Cilmi yare). Kadib markii xukun
dhawr sanadood ah oo ay hore Maxkamadda gobolka Hargeysa ugu xukuntay. Balse garsooraha Maxkamadda rafcaanka C/raxmaan jaamac Hayaan ayaa maanta ku dhawaaqay go,aan xoriyadoodii loogu celiyo labadaa masuul oo lagu wayay xukun kii hore loogu riday.
Gudoomiyaha Maxkamadda Rafcaanku waxa uu sheegay markii uu dhagaystay, isla markaana ka baaraan-degey Dacwadda musuq- maasuq ee hore loogu xukumay masuuliyiintan aanay jirin Cadaymo lagu qanci karo oo muujinaya inay danbigaaa galeen labadaa masuul.
Sidoo kale waxa uu sheegay garsooraha Maxkamadda Rafcaanku inaan la horkeenin maxkamadda Raashinkii lagu eedaynayay ee lagu soo qabtay iyaga oo Lunsanaya, sidaa daraadeed waxa uu go’aamiyay in Xorriyadooda loo celiyo.
go’aanka Maxkamadda Rafcaanka ayaa ka cadhaysiiyay Xeer ilaalinta oo hore uga caga-jiidaysay Rafcaanka ay xukunkaa hore ka qaateen labadaa masuul, iyadoo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo wejigabax kala kulmay xukunka maxkamadda rafcaanku xoriyadoodii ugu soo celisay. iyadoo wararka qaar sheegayaan in xeer ilaalintu ka qaadatay rafcaan go’aanka maxkamadda.
Published October 10, 2012 By info
Ciidamada Amaanka Somaliland Oo Xoriyadoodii usoo Celiyay Gudoomiyihii Wargeyska Saxafi Iyo Sadex Dhalinyaro Ah